DOHA (Reuters) - Chinangwa chenguva-yakati kubva kuna Roberto Firmino chakapa Liverpool kukunda 1-0 yeFlamengo yeBrazil kukunda mukombe weClass World Cup munhandare yeCalifa International neMugovera.
Ino inguva yekutanga Liverpool kuhwina mukwikwidzi, iyo inoratidzira makundano ese ekondinendi, uye ivo vakave chete yechipiri timu yeChirungu kusimudza mukombe mushure meManchester United muna2008.
Mafuta weBrazil Firmino akadzingira kumba mukohwina muminiti yepfumbamwe yenguva yakawedzerwa kuchengetedza kukunda kweJugengen Klopp's European Champions uye vatungamiriri vePremier League.
Rutivi rwepedyo kana rwese rwakauya kuzotyora nguva yekufa munguva yakajairwa apo Firmino paakarova positi maminitsi maviri mushure mezororo uye pakave nemutambo mushure mekunge Liverpool yawana mubairo-wenguva yekupihwa mubairo wetsiva ichidzoka zvichitevera kuongororwa kweVAR.
Liverpool, ine mutambi wechiDutch Virgil van Dijk achidzokera kudivi mushure mekurwara, akatanga zvakajeka uye Firmino akawana mukana wekutanga asi akaputika pamusoro.
Naby Keita akave akaisirwazve zvakaipa mushure mekugadzwa naMohamed Salah, uyo zvakare akabata ruoko rwake rwese rwakakomberedzwa nekwakakura kwevaIjipita muboka revanhu zviuru makumi mana.
Trent Alexander-Arnold akadhiraivha rurefu rurefu rurefu nguva yadarika positori sezvo Liverpool yaitarisira kuwedzera hukuru mukutonga kwavo kwekutanga.
Asi, achitsigirwa neruzha rwegumi nemazana zviuru zvitatu rutsigiro kubva kuBrazil, Flamengo akakurira mumutambo uye akatanga kuunza mibvunzo yekudzivirira kwaKlopp.
Joe Gomez aifanirwa kuita yekupedzisira kurira kuti abate njodzi Bruno Henrique uye naiye skipper Everton Ribeiro achiraurisa munhandare, Flamengo vairatidza chaizvo chikonzero nei vakave maSouth America vari pasi pekudairwa nemutungamiriri wechiPutukezi, Jorge Jesus.
Liverpool yakanyorerwazve panguva yekuzorora uye ivo vaifanira kunge vakaenda kumberi apo Firmino akapfuudza pasi kubva kuJordani Henderson uye kugadzira nzvimbo asi aigona kungorova iyo post nefuti.
Salah akaswedera pedyo uye Flamengo akatsvaga kwakawanda nhamba pfumbamwe Gabriel Barbosa kaviri kumanikidza Alisson Becker kuita chiito pamberi pechinguvana chakasiya Klopp achitaridzika achizununguka.
Midfielder Alex Oxlade-Chamberlain akazadza zvakaipa mushure mekupokana nendege, achikuvadza iro ibvi rekurudyi iro iro raakakuvadzwa ligament kukuvara muna 2018 uye rakamunzvenga kwegore.
Kutarisisa pazviso zvevatambi kwakaratidza kuti kukuvara kweEngland kushungurudzika kunogona kunge kwakakura uye kumwezve kuregera kukashungurudza mwana ane makore makumi maviri nemasere.
Salah akange ane bhora mumambure mumamineti makumi matanhatu nemasere asi kuedza kwake kwakatongwa nenzira kwayo uye nemuchengeti weFlamengo Diego Alves aive azere kutenderera kuti Henderson apfurwe.
Ndipo pakazouya mutambo uyu unonakidza asi usingakanganwiki mutambo wanga uchinge uchinge usipo - Sadio Mane kuputika chinangwa uye Rafinha akaita kusimuka achidonha kubva kumashure sezvo Senegalese mberi yakafemera upamhi.
Mutenderi weQatari Abdulrahman Al Jassim akanongedza panzvimbo iyi, achitonga aimbova mutemeri weBayern Munich akange atemesa Mane asi akasiya munda kuti atarise mutarisiri weVAR uye akachinja danho rake mushure mekuronga chiitiko chakaitika kunze kwenzvimbo.
Izvi zvaireva makumi matatu emaminetsi ekuwedzera-nguva uye kutyisidzirwa kwechirango kupfura asi mutambo wakagadziriswa nekuda kwekutanga yeLiverpool inopokana.
Henderson akawana Mane aine bhora rinotyisa uye Senegalese hitter span uye akadyisa Firmino, weBrazil akadzikama akacheka mukati, achirasikirwa nemaki uye achirovera kumba.
Yakanga ichine nguva yemumwe mukana wekupedzisira asi yaisave yehusiku hwaFlamengo, kutsiva Lincoln achidzingirira mushure mekunge asarudzwa nebhora rakangwara kubva kuVitinho, uye maBrazilians anga atora kubva kuRio kuenda kuGulf akasara kuti anoona Klopp uye vatambi vake vanofarira humwe usiku hwekupemberera.